Isivumelwano selayisensi | Law & More B.V. | Inetherlands
Blog » Isivumelwano selayisensi
I-intellectual property amalungelo akhona ukukhusela indalo yakho kunye nemibono ekusebenziseni okungagunyaziswanga ngumntu wesithathu. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, umzekelo ukuba ufuna ukuba indalo yakho ixhaphaze ngentengiso, unokufuna ukuba abanye bakwazi ukuyisebenzisa. Kodwa malini amalungelo ofuna ukubanika abanye malunga nepropathi yakho enomgangatho ophezulu wokuqonda? Umzekelo, ngaba umntu wesithathu uvumelekile ukuguqula, ukunciphisa okanye ukulungelelanisa isicatshulwa osigcinele ilungelo lokushicilela? Okanye uphucule uyilo lwakho lobunikazi? Isivumelwano sephepha-mvume yindlela efanelekileyo yomthetho yokuseka amalungelo kunye noxanduva lomnye malunga nokusetyenziswa nokuxhaphazwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Eli nqaku lichaza ngokuchanekileyo ukuba kubandakanya ntoni na isivumelwano selayisenisi, zeziphi iintlobo ezikhoyo, kwaye zeziphi izinto ezihlala ziyinxalenye yesi sivumelwano.
Imveliso yengqondo kunye nelayisensi
Iziphumo zomsebenzi wengqondo zibizwa ngokuba ngamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Iindidi ezahlukeneyo zamalungelo ziyahluka ngokwendalo, ukuphatha kunye nexesha. Imizekelo ngamalungelo obunini, amalungelo ophawu lwentengiso, amalungelo abenzi kunye namagama orhwebo. La malungelo abizwa ngokuba ngamalungelo awodwa, oko kuthetha ukuba abantu besithathu banokuwasebenzisa kuphela ngemvume yomntu onamalungelo. Oku kukuvumela ukuba ukhusele iimbono ezicacisiweyo kunye neengcinga zokuyila. Enye indlela yokunika imvume yokusebenzisa kubantu besithathu kukukhupha iphepha-mvume. Oku kunokunikwa nangaluphi na uhlobo, nokuba kungomlomo okanye kubhalwe. Kuyacetyiswa ukuba oku ekubhaleni phantsi kubhalwe kwisivumelwano selayisensi. Kwimeko yelayisensi ekhethekileyo yelungelo lokushicilela, oku kuye kufuneke nangumthetho. Iphepha-mvume elibhaliweyo likwanokubhaliswa kwaye liyanqweneleka kwimeko yeembambano kunye nokungaqondakali malunga nomxholo welayisensi.
Umxholo wesivumelwano selayisensi
Isivumelwano selayisensi sigqityiwe phakathi komnini welayisenisi (umnini welungelo lobunini) kunye nomnini-layisenisi (lowo ufumana iphepha-mvume). Undoqo wesivumelwano kukuba umnini wephepha mvume angasebenzisa ilungelo elilodwa lomnini welayisenisi phantsi kweemeko ezichazwe kwisivumelwano. Logama nje umntu onikwe iphepha-mvume ebambelela kule miqathango, umnini-layisenisi akazukusebenzisa amalungelo akhe kuye. Ngokomxholo, ke, kuninzi ekufuneka kumiselwe ukuze kuthintelwe ukusetyenziswa komnini-layisenisi ngokwemida yemvume yelayisenisi. Eli candelo lichaza ezinye zezinto ezinokubekwa kwisivumelwano selayisensi.
Amaqela, ubungakanani kunye nexesha
Okokuqala, kubalulekile ukuba uchonge ifayile ye- Maqela kwisivumelwano selayisensi. Kubalulekile ukuqaphela ngononophelo ukuba ngubani onelungelo lokusebenzisa iphepha-mvume ukuba lichaphazela inkampani yeqela. Ukongeza, amaqela kufuneka abhekiswe kuwo ngamagama abo apheleleyo asemthethweni. Ukongeza, umda kufuneka uchazwe ngokweenkcukacha. Okokuqala, kubalulekile ukuyichaza ngokucacileyo ifayile ye- into enxulumene nelayisenisi. Umzekelo, ngaba ichaphazela kuphela igama lorhwebo okanye isoftware? Inkcazo yelungelo lomenzi wechiza kwisivumelwano ke iyacetyiswa, kananjalo, umzekelo, isicelo kunye / okanye inombolo yokupapasha ukuba ichaphazela ilungelo lomenzi okanye uphawu lwentengiso. Okwesibini, kubalulekile ingasetyenziswa njani le nto. Ngaba umntu onikwe iphepha-mvume angashiya amaphepha-mvume amancinci okanye asebenzise ilungelo lobunini bobuchwephesha ngokulisebenzisa kwiimveliso okanye kwiinkonzo? Okwesithathu, i kwintsimi (umzekelo, iNetherlands, iBenelux, iYurophu, njlnjl.) apho iphepha-mvume linokusetyenziswa khona kufuneka ichazwe. Okokugqibela, i ubude kufuneka kuvunyelwene, enokulungiswa okanye ingapheliyo. Ukuba ilungelo lomenzi wechiza lichaphazelekayo linomda wexesha, oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Isivumelwano kufuneka sichaze nokuba luhlobo luni lwelayisensi olo. Kukho amathuba amaninzi, apho ezi zixhaphake kakhulu:
Okukodwa: Umnini-layisenisi yedwa ufumana ilungelo lokusebenzisa okanye ukuxhaphaza ilungelo lobunini bobunini.
Ayikhethi bodwa: Umnini welayisenisi angalayisenisa amanye amaqela ukongeza kumnini welayisenisi kwaye asebenzise kwaye asebenzise ilungelo lobunini ngokwalo.
Wedwa: uhlobo olukhethekileyo lwelayisenisi apho umntu onikwe iphepha-mvume anokusebenzisa kwaye asebenzise ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nelayisenisi.
Vula: Naliphi na iqela elinomdla elihlangabezana nemiqathango liya kufumana ilayisensi.
Rhoqo umrhumo ophezulu unokufunyanwa kwilayisensi ekhethekileyo, kodwa kuxhomekeka kwiimeko ezithile ukuba ngaba lukhetho olufanelekileyo. Iphepha-mvume elinganyanzelekanga linokubonelela ngokuguquguquka ngakumbi. Ukongeza, ilayisensi ekhethekileyo inokungabinamsebenzi xa unika iphepha-mvume elilodwa ngenxa yokuba ulindele ukuba elinye iqela lithengise umbono wakho okanye umbono, kodwa umnini-layisenisi akenzi kwanto ngawo. Ke ngoko unokumisela uxanduva oluthile kumntu onikwe iphepha-mvume malunga nokuba makenze ntoni na ngamalungelo akho epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda njengona ubuncinci. Kuxhomekeka kuhlobo lwelayisensi, ke ngoko kubaluleke kakhulu ukubeka phantsi imeko apho iphepha-mvume linikezelwa phantsi kwalo.
Okokugqibela, kunokubakho eminye imiba esihlala sijongana nayo kwisivumelwano selayisensi:
The Ntlawulo kunye nesixa sayo. Ukuba umrhumo uhlawulisiwe, inokuba sisixa esimiselweyo samaxesha athile (umrhumo welayisensi), iiroyalties (umzekelo, ipesenti yengeniso) okanye isixa-mali esinye (Lump sum). Amaxesha kunye namalungiselelo okungahlawuli okanye ukuhlawulwa emva kwexesha kufuneka kuvunyelwene.
Umthetho osebenzayo, inkundla efanelekileyo or ulamlo / ulamlo
Ulwazi oluyimfihlo kwaye ukugcinwa kwemfihlo
Ukuhlaliswa kolwaphulo-mthetho. Kuba lowo unephepha mvume akanalungelo ngokusemthethweni lokuqalisa iinkqubo ngaphandle kwemvume yokwenza oko, oku kufuneka kulawulwe kwisivumelwano ukuba kuyafuneka.
Ukuhanjiswa kwelayisensi: ukuba ugqithiso alunqwenelwa ngumnini welayisenisi, kufuneka kuvunyelwene kulo isivumelwano.
Ukugqithiswa kolwazi: isivumelwano selayisensi sinokugqitywa kulwazi. Olu lulwazi oluyimfihlo, ngesiqhelo lobuchwephesha, obungagutyungelwanga ngamalungelo awodwa omenzi wechiza.
Uphuhliso olutsha. Izivumelwano kufuneka zenziwe malunga nokuba ngaba uphuhliso olutsha lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda luyakhuselwa na nelayisensi yomnini-layisenisi. Isenokuba yimeko yokuba umntu onephepha mvume ayiphuhlise ngakumbi imveliso kwaye umniki-layisenisi unqwenela ukuzuza koku. Kwimeko apho, ilayisensi engakhethiyo yelayisenisi yophuhliso olutsha kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda inokuchazwa.
Isishwankathelo, isivumelwano selayisensi sisivumelwano apho umntu onikwe iphepha-mvume anikwa amalungelo ngumnini-layisenisi wokusebenzisa kunye / okanye ukuxhaphaza ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Oku kuluncedo kwimeko apho umniki-layisenisi anqwenela ukwenza urhwebo ngengcinga yakhe okanye asebenze ngomnye umntu. Isivumelwano selayisensi esinye asifani nesinye. Kungenxa yokuba sisivumelwano esineenkcukacha esinokwahluka ngokobungakanani kunye neemeko. Umzekelo, inokusebenza kumalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nendlela esetyenziswa ngayo, kwaye kukho umahluko ngokwentlawulo kunye nokuzikhethela. Ndiyathemba ukuba eli nqaku likunike umbono olungileyo malunga nesivumelwano selayisensi, injongo yaso kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kumxholo wayo.
Ngaba usenemibuzo malunga nesi sivumelwano emva kokufunda eli nqaku? Ke nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu akhethekileyo kumthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, ngakumbi kwicandelo lobunini, umthetho wophawu lwentengiso, amagama orhwebo kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza. Sikulungele ukuphendula yonke imibuzo yakho kwaye singakuvuyela ukukunceda wenze isivumelwano selayisensi esifanelekileyo.
Post edlulileyo Indima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima
Post Next Ukutshintshwa kokuqhutywa